EverBestMM – Page 41 – Daily Special News
Ever Y | May 9, 2020
ဆန်ဖရန် စစ္စကိုမှာ လူကောင်း ၄၁၆၀ ကို စစ်တာ လူ ၂.၁% မှာ ကိုဗစ် ၁၉ တွေ့တယ်။ ရောဂါပိုးတွေ့သူတွေကို မေးကြည့်တော့ ၁၀ ယောက်မှာ ၉ ယောက်က အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ကျနော်တို့လို လူမျိုးတွေလေ။ အိမ်မှာ ထိုင်လုပ် နေပြီး ပိုက်ဆံရတာမျိုး (Work from
ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေ နဲ့ သင်ကြားပြသမှုတွေကို သတိရကြဖို့ အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် နရင်ဒရာမိုဒီက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ အခုလို ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရ ချိန်မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရဲ့ အဆုံးအမတွေက ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် နရင်ဒရာမိုဒီက
Covid-19 ရောဂါပိုး မတွေ့တော့တဲ့ လူဦးရေ စာရင်းမှာ အဆိုတော် မျိုးကြီး ပါဝင်လာ
(၂)ကြိမ်ဆက်တိုက် Negative ဖြစ်နေ ခဲ့တာပါ။ လူနာနံပါတ် ၄၆ ဟာ အဆိုတော် မျိုးကြီးဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးရာ မှာ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် Negative ပြနေခဲ့တာဖြစ်လို့ ရောဂါကင်းစင်သူစာရင်းထဲ ပါဝင်လာတာပါ။ဒီနေ့ည(မေလရက်) COVID-19 ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေး နဲ့ အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းအရ COVID-19
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ရဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ဇစ်မြစ် သက်သေရှိပြီဆိုတာအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တုံ့ပြန်ပြောဆို… အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မိုက်ပွမ်ပီယို ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဇစ်မြစ် သက်သေရှိပြီဆိုတဲ့အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွန်းရင်က အာရုံလွှဲ အပုတ်ချ ဇာတ်ညွှန်းဟာ ဇာတ်သိမ်းအထိပေါ်လွှင်နေပြီ ဖြစ်လို့ ဇာတ်ညွှန်းအတိုင်း ဆက်၍သရုပ်ဆောင်နေတာဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိမည်
အသုဘ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီး အအေးတိုက်မှ ထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ် တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ မိဘကျေးဇူးတွေနဲ့ အယူသီးမှုတွေကို ခွဲခြားသိမြင်နိင်ပြီး သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရား။ အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှ ထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံး သူရဲ့အိမ်သို့ ပို့ဆောင်ဖို့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်… အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ အလောင်းကို အိမ်ထဲသွင်းမယ် လုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ်ပေါ့ ကားပေါ်ကနေ အလောင်းချမယ်လုပ်တော့
စက်ေ ရတွင်းတူးမည် ဆို ပါ က မှတ်သား ရန်.
စက်ရေတွင်းတူရာ၌ ရေ-ရှိ,မရှိ၊ ရေ-နည်း,ရေများခန့်မှန်သိရှိနိုင်ပုံလေးကို ဗဟုသုတအနေဖြင့် မျှဝေပေးပါမည်။ ရေ-ရှိ/မရှိ ၁။ အရွက်အမြဲတမ်း ရှိနေတတ်သော အုန်းနှဲပင်၊မယ်ဇလီပင်၊ မြက် စသည့်အပင်များစိုစိုပြေပြေ လန်းလန်းဆန်းရှိနေပါက ထိုနေရာတွင် ရေရှိသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်၍ ဖော်ပြပါလက္ခဏာများနှင့် ဆန့်ကျင်နေပါက ရေ-မရှိဟု ခန့်မှန်း သိနိုင်ပါသည်။ ရေချို/ရေငန် ၂။ အနီးအနားတွင်ရှိသော သစ်ပင်တို့သည် အပင်အမျိုးအစားခြင်းတူပါလျက် အခြားနေရာရှိ သစ်ပင်မှ
ကွမ်းစား သူ များအေ နဖြင့် စစ်ဆေးသင့် တဲ့ လျှာကင်ဆာ ရဲ့ ရှေ့ပြေး လက္ခဏာ (၇ )ချက် ‼️
လျှာ ကင်ဆာရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေဟာ လျှာရဲ့အဖျားပိုင်း ၃ ပုံ ၂ ပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးပညာရှင်တွေကတော့ လျှာရဲ့ အဖျားပိုင်း ၃ ပုံ ၂ ပုံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကင်ဆာကို ပါးစပ်ကင်ဆာအမျိုးအစားအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ လျှာရဲ့အရင်းပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေရင်တော့ လည်ချောင်းကင်ဆာ အမျိုးစားထဲမှာ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ဈေး ဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ေ ရာက်ရင် အင်္ကျီ ၊ ဖိနပ်၊ ဆံပင်တွေမှာ ဗိုင်း ရပ်စ်ပိုး ကပ်ပါလာနိုင်သလား?
ဒီကိစ္စကို ရောဂါပိုးကျွမ်းကျင်သူတွေဖြေထားတာရှိပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေ အင်္ကျီလဲပြီး ခေါင်းကနေလောင်းပြီး ရေချိုးပစ်ရမှာလား? အပြင်ထွက်ရင် ဈေးထဲမှာ Social Distancing လုပ်ပြီး ခပ်ခွာခွာဈေးဝယ်ကြပါသလား? ဥပမာ – City Mart မှာ ဈေးဝယ်တယ်၊ ခပ်ခွာခွာရပ်တယ်။ လူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းတယ်။ ဒါဆိုရင် အင်္ကျီကို ချိတ်နဲ့ချိတ်ပြီး ပြန်လှမ်းထားလို့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူတွေကျပ်ညပ်နေတဲ့
ကျောက် ကပ် ဆေးေ နရ တဲ့ ဝေဒနာ ရှင် များ အတွက် အကုန် အကျ သက်သာစေမယ့် ဆေးနည်းကောင်း
သူငယ်ချင်းများ အားလုံး share ပေး ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ် ။ (ကွမ်းစားတဲ့သူ ကားသမားအချင်းချင်းမို့ လက်တို့လိုက်တာပါ။) ကွမ်းစားသူများ ခဏခဏ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များ ကျောက်ကပ်လဲရမည့်သူများ ကတက်ခေါက်ကို သတိရပါလေ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး share ပေး ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ် ။
Miss Supranational Myanmar 2013 ဆုရှင် ခင်ဝင့်ဝါ ကတော့ အလှမယ်ဘဝ ကနေ နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးဖြစ်လာပြီး အခုဆိုရင် အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဝင့်ဝါက ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးပြီး ရရှိလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ခင်ဝင့်ဝါ ရဲ့